Kenya ,Wasiirka Arimaha Dibada, Ciidamadaya sadex arimood ayuunbaanu uga saari karnaa soomaaliya | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Kenya ,Wasiirka Arimaha Dibada, Ciidamadaya sadex arimood ayuunbaanu uga saari karnaa soomaaliya
Kenya ,Wasiirka Arimaha Dibada, Ciidamadaya sadex arimood ayuunbaanu uga saari karnaa soomaaliya
Wasiirka Gaashaandhigga Kenya, Monica Juma, oo wareysi siisay Wargeyska Nation ee saldhiggiisu yahay magaalada Nairobi, ayaa faahfaahin ka bixisay sababaha ku xiran in milatariga Kenya ee ku sugan Soomaaliya laga soo saaro.
Juma ayaa meesha ka saartay warar dhawaanahanba la isla dhex marayay oo ku saabsanaa in Kenya ay qorsheyneyso sidii ay ciidankeeda uga soo saari lahayd Soomaaliya, waxayna sharraxaad ka bixisay shuruudaha ku xidhan tallaabo noocaas ah.
“Runtii maba jiraan waxyaabo u baahan in la kala caddeeyo. Kenya waxay qeyb ka tahay waddamada ay ciidamadooda ku jiraan Amisom. Waxaan halkaas ku tagnay qaraar kasoo baxay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Laakiin waa la ogyahay in howlaha aan Soomaaliya ka wadno ay goor horeba sii socdeen laga soo billaabo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1991-1992-kii,” ayey tidhi Juma.
Iyadoo hadalkeeda sii wadata ayey sheegtay in dhowr arrimood uun ay keeni karaan in ciidamada Kenya laga soo saaro Soomaaliya, waxayna tidhi: “Sabab ayaan Soomaaliya u tagnay, dabcanna way jiraan shuruudo ku xiran in annagoo Amisom la mideysan aan ka soo baxno halkaas. Shuruudahaas waxay kala yihiin; In nabad laga hirgaliyo Soomaaliya, in laga adkaado Al-Shabaab iyo in laamaha gudaha ay awood u yeeshaan sugidda amniga.”
Hadalka Juma wuxuu gabi ahaanba meesha ka saarayaa in Kenya ay si gaar ah u tixgalineyso tallaabo ku aaddan sidii ay ciidankeeda uga saari lahayd Soomaaliya, waxayna caddeysay “in mar walba ay qeyb ka yihiin go’aannada guud ee Amisom, oo hoos tagta Midowga Afrika.
Bishii March ayey soo baxeen warar ku saabsan in Kenya ay isu diyaarineyso wadahadal ku aaddan in ay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya.
Amisom ayaa Soomaaliya u joogta howlgal nabad ilaalin ah
Xilligaas waxaa la sheegay in Wasiirka Gaashaandhigga Kenya, Monica Juma, ay hormuud ka noqon doonto wadaxaajoodka ka bixitaanka Soomaaliya, kaasoo qeyb ka ah qorshaha ciidamada AMISOM Soomaaliya looga saarayo sanadka 2021-ka.
Hadal-heynta ku saabsan bixitaanka ciidamada Kenya waxay socotay tan iyo horaantii sanadkii lasoo dhaafay, markii uu soo ifbaxay muran dhinaca xadka badda ah oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Ciidamada Kenya ayaa bishii October ee sanadkii 2011-kii gudaha u galay Soomaaliya si ay halkaas ugula dagaallamaan xooggaga Al-Shabaab oo khatar ku hayay amniga gudaha Kenya.
Fariisimaha milatariga Kenya ee Soomaaliya ayaa ku yaalla deegaannada hoos taga maamulka Jubbaland. Dhawaanahan waxaa soo noqnoqonayay cabasho ku aaddan dad rayid ah oo waxyeello kala kulmay ciidamada qeybta ka ah Amisom ee ku sugan aagaggaas – gaar ahaan kuwa Kenya – inkastoo ay socdeen baaritaanno ay sameynayeen mas’uuliyiinta maamulka Jubbaland.
Dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay, milatariga dowladda Kenya iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayey israsaaseyn daqiiqado socotay dhex martay maalintii Sabtida, xilli ay ku wada sugnaayeen xadka u dhaxeeya labada waddan.
Milatariga Kenya waxay Soomaaliya gudaha u galeen 2011-kii
Saraakiil maxalli ah iyo dad goob joogeyaal ah ayaa sheegay in isku dhaca labada ciidan uu yimid kaddib markii ciidanka Kenya ay rasaas ku fureen mudaharaadeyaal Soomaali ah oo xaggooda u sii dhawaanayay.
Arrintan ayaa ka dhacday furinta ay ciidamada kala joogaan ee u dhaxeysa magaalooyinka Beledxaawo iyo Mandheera, gaar ahaan meel u dhow xadka dhinaca Waqooyi ee ay labada dal la wadaagaan waddanka Itoobiya.
Guddoomiyaha gobolka Gedo Nuur Xaaji Macalimow ayaa israsaaseynta dhex martay labada ciidan u xaqiijiyay BBC-da.
“Ciidammada Kenya ayaa rasaas ku furay dad mudaaharadayay kuna sugnaa agoob u dhaw xadka beledxaawa iyo Mandera. Ciidammada xoogga dalka Soomaaliya ayaa iyagana ka jawaabay oo rasaas ku furay ciidammada Kenya”, ayuu yiri Nuur Xaaji Macalimow.
Ma jiro wax khasaare ah oo ay sababta israsaaseynta dhex martay labada ciidan iyo rasaasta ka horreysay ee lagu furay dadka rayidka ah, sida ay sheegtay Wakaaladda Wararka ee AFP.
Shacabka mudaharaadayay ayaa ka cadheysnaa dhacdo laga soo tabiyay deegaanka Yado ee u dhow degmada Ceelwaaq, halkaasoo la sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ay ku dileen hal wiil oo Soomaali ah sidoo kalena ku kaxeysteen saddex nin oo ay ku jiraan wiilka dhintay aabihiis iyo walaalkiis.
Previous articleGabdh la dhalatey prof alydh AHUN ayaa si adag ua hortimd baadhitaan la,aantii lagu aasey walaalkeed
Next articleKala Garo: “Hogaamiye Iyo Siyaasi”Cali Guray.
BERBERA Badhasaabka saaxil oo kahadlay waqtiga la shacin doono xareynta CV yada dhalinta shaqo
Wafti jabuutiyaan ah oo Hargaysa Lagusoo dhaweeyay
Madaxwayne Muuse Biixi Oo Salaadi Iida Adxa La Tukaday Shacabka Hargeysa
:Xukumada S/land oo shaacisey Heshiis ay wadagaleen Hayada Madaarada S/land &...
Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Soomaalida oo sagootiyay ciidamo loo dirayo Tigray
Berbera Maxaa Usahlay inay noqoto magaalo bilicsan oo nadiifa,
Gudi Madaxbanaan oo Afrika ka socda oo ka dayriyay xaalada mamul...
Boqortooyada sucuudig oo fasaxday in tukaamadu iska furnadan xiliyada salaada,
Xisbiyada Mucaaridka Waxan Lee Yahay Xildhiban Walba Fikirkisa Ha Lagu Tix...
Siyasi Ramax, Xisbiga Nalagama sari karo,Maxkamada ayaanu la galynaa faysal cali...
Heshiiskayagu Kaliya Wuxu Ku Kooban Yahay Inaanu Isku Aragti Ka Nahay...